စက်မှု ဆော့ဖ်ဝဲ ကုမ္ပဏီ UniVista သည် Pre-A ရန်ပုံငွေ တွင် ယွမ်သန်း ၁၁၀ ကျော် ရှိသည် – Pandaily
စက်မှု ဆော့ဖ်ဝဲ ကုမ္ပဏီ UniVista သည် Pre-A ရန်ပုံငွေ တွင် ယွမ်သန်း ၁၁၀ ကျော် ရှိသည်
Jun 01, 2022, 18:44ညနေ 2022/06/01 23:20:34 Pandaily
Electronic Design Automation (EDA) နှင့်စက်မှု ဆော့ဝဲလ် ဖြေရှင်း မှု ပံ့ပိုး သူ Shanghai UniVista Industrial Software Group က ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင် ကြေငြာ ခဲ့သည်ယွမ် ၁. ၁ ဘီလီယံ ထက်ကျော်လွန် သော ကြိုတင် A ရန်ပုံငွေ ပြီးစီး ခဲ့သည်(ေဒၚလာ ၁၆၄ ဒသမ ၃ သန္း) ။
Taihecap တစ်ဦး တည်း သာ ဘဏ္ဍာရေး အကြံပေး အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် နေစဉ် ဤ ပတ်ပတ်လည် ထိုကဲ့သို့သော Shangqi Capital ကို, IDG, တရုတ် သိပ္ပံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံခန့်ခွဲ မှု Co., Ltd မှ, တရုတ် မော်တော်ယာဉ် Chip မဟာမိတ် အဖွဲ့, Flying Capital ကို, GAC, GAC Capital ကို Co., Ltd မှ အဖြစ် လူသိ များတဲ့ အဖွဲ့အစည်းများက ပူးတွဲ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့ပါတယ်, လက်ရှိ ရှယ်ယာရှင် များ SummitView Capital ကို နှင့် Magnolia Investment လည်း ပါဝင်ပတ်သက် ခဲ့ကြသည်။ UniVista သည်ယွမ် ၃ ဘီလီယံ နီးပါး စုဆောင်း ထားသည့် ရန်ပုံငွေ ၂ ခုကို ပြီးစီးခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး UniVista သည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် စက်မှု ဆော့ဖ်ဝဲလ် ဖြေရှင်း ချက်များကို သီးခြား ပံ့ပိုး သူဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အစ ပိုင်းတွင် EDA ကိုအာရုံစိုက် ခဲ့ပြီး semiconductor ကုမ္ပဏီများသည် ဆန်းသစ် တီ ထွ င်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ကြီးမားသော စိန်ခေါ် မှုများနှင့် အဓိ ကပြ issues နာများကို ဖြေရှင်းရန် ကူညီရန် ကတိက ဝတ်ပြု ခဲ့သည်။
UniVista သည် မကြာသေးမီက အမျိုးမျိုးသော EDA ထုတ်ကုန်များနှင့် ဖြေရှင်းနည်း များ ကိုစတင် မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ချစ်ပ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှုတွင် အလုပ်လုပ်သော အတည်ပြု ခြင်း၊ debugging နှင့် အကြီးစား စမ်းသပ်မှု စီမံခန့်ခွဲ ခြင်းစသည့် ကွဲပြားခြားနားသော လုပ်ငန်းတာဝန် များ၏ စိန်ခေါ် မှုများကို ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဖြေရှင်း ရန်နှင့် အဆင့်မြင့် ထုပ်ပိုး မှုစနစ် အဆင့် ဒီဇိုင်း ပူးပေါင်း မှုကို အထောက်အကူပြု နိုင်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:JSDsign သည် B + စီးရီး ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာသန်း ချီ ရရှိ ခဲ့သည်
ကုမ္ပဏီ၏ EDA ထုတ်ကုန်များနှင့် ဖြေရှင်းနည်း များတွင် UniVista Advanced Prototyping System (“ UV APS” ) ၊ နောက် မျိုးဆက် အချိန်ကိုက် မောင်းနှင် နိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ရှေ့ပြေးပုံစံ စနစ် ဖြစ်သည်။ ခရမ်းလွန် APS လျင်မြန်စွာ 4-100 VU19P FPGA အဆ ငျ့ ဆ ငျ့ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် ရှေ့ပြေးပုံစံ အလိုအလျောက် နိုင်သည့် ရှေ့ပြေးပုံစံ စနစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် UniVista Integrator (“ UVI” ) ၏ sign-off full-featured version သည် အဆင့်မြင့် ထုပ်ပိုး ပူးပေါင်း ဒီဇိုင်း စစ်ဆေးခြင်း ကိရိယာ တစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ လည်း ထိရောက်သော နှင့် အသုံးပြု ရလွယ်ကူ ဒစ်ဂျစ်တယ် အလုပ်လုပ်တဲ့ ခြင်း simulation debugging tool ကို UniVista Debugger (“ UVD” ), အကြီးစား Functional Verification Regression Test Management Platform UniVista Verification Productivity System (“ VPS” ) နှင့် Plug-and-play Hybrid ရှေ့ပြေးပုံစံ System-Level IP Verification Solution UniVista Hybrid IPK (“ HIPK” ) ကို ဖြန့် ချိ ခဲ့သည်။
Shandong HoteamSoft Co., Ltd. သည်စုစုပေါင်း ယွမ်သန်း ၄၀၀ (ဒေါ်လာ ၆၃ သန်း) နီးပါး ရှိသော C ရန်ပုံငွေ ပြီးစီး ကြောင်း အင်္ဂါနေ့က ကြေငြာခဲ့သည်။
CAE Developer Supreium သည် Round A ရန်ပုံငွေ အတွက် ယွမ်သန်း ၁၀၀ နီးပါး ရရှိ ခဲ့သည်
ဘေဂျင်း အခြေစိုက် စက်မှုလုပ်ငန်း ဆော့ဖ်ဝဲ ရေး သူ Supreium က Round A နှင့် Round A + ရန်ပုံငွေ အတွက် ယွမ်သန်း ၁၀၀ နီးပါး (ဒေါ်လာ ၁၄. ၉၆ သန်း) ရရှိ ခဲ့သည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။ အဓိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများမှာ IDG နှင့် Sequoia China တို့ဖြစ်သည်။